काम नभए पनि बसीबसी भत्ता ! | जनदिशा
काठमाडौं, १२ भदौ । के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? सीप भए पनि काम नपाएर दिनभर कतै बरालिनुभएको छ ? त्यसो भए पनि चिन्ता नमान्नुहोस् । सरकारले तपाईँलाई बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाबीच खटपट सुरु
Next Next post: कञ्चनपुरका अर्का एक युवा, जसलाई प्रहरीले ११ दिन थुन्यो !